Kuzohlonishwa uBhodloza ngeziqu | Isolezwe
Kuzohlonishwa uBhodloza ngeziqu
Izindaba / 5 September 2018, 11:32am / NOKUBONGWA PHENYANE
INKAKHA ekusakazeni uWelcome ‘Bhodloza’ Nzimande ungomunye wabazohlonishwa ngeziqu zobudokotela isikhungo iDUT ngoLwesihlanu ngenxa yegalelo lakhe lokuthuthuisa umculo womaskandi kuthelevishini nasemsakazweni
UWELCOME Bhodloza Nzimande, Esther Mahlangu, Sipho Mchunu noJohnny Clegg, kuzothi ngoLwesihlanu bahlonishwe ngeziqu zobudokotela isikhungo semfundo ephezulu, iDurban University of Technology (DUT).
Lezi zingqalabutho ezizakhele igama ngokwenza izinto ezahlukene kuleli, zizohlonishwa ilesi sikhungo ngegalelo lazo lokuqhakambisa elakuleli emazweni ahlukene zisebenzisa amakhono azo.
Ugogo Esther Mahlangu uzohlonishwa ngegalelo lakhe lokugqama ngisho naphesheya kwezilwandle njengomdwebi esebenzisa usiko lwesiNdebele.
Umculi uSipho Mchunu uzohlonishwa ngenxa yegalelo lakhe alidlala eqenjini lomculo iJuluka nokuba nezwi esebenzisa umculo ngezinto ezahlukene ezikhathazile emphakathini njengezidakamizwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane.
UBhodloza uzohlonishwa ngeqhaza lakhe elikhulu lokuqhakambisa umculo womaskandi njengoba awusakaza iminyaka engu-32, washiya ukuwusakaza ngo-2010, kuthelevishini nasemsakazweni ngaphansi kwenhlangano yokusakaza iSABC.
UJonny Clegg yena uzohlonishwa ngeqhaza lakhe lokuthuthusa umculo wakuleli naphesheya kwezilwandle.
UClegg, ungomunye wabaculi abamhlophe abacula ngolimi lwesiZulu, umculo wabo ojatshulelwa ngisho phesheya kwezilwandle.
Laba bazohlonishwa esikhungweni iFred Crookes Sports Centre, eSteve Biko Campus, ngehora lokuqala emini.
Entintwa Isolezwe, uBhodloza uthe, ngeke akhulume ngalokhu kuhlonishwa kwakhe kungakenzeki.
“Ngicabanga ukuthi kungcono ngihlonishwe kuqala bese siyakhuluma ngalolu daba. Okwamanje ngeke ngiphawule ngalutho,” kuchaza yena.